မီးမနေတတ်တော့ဘူး – Grab Love Story
ဦးမင်းအောင် … ဝူးကနဲ မောင်းထွက်သွားတဲ့ …နတ်မိမယ်လေးကို …. အရမ်းသဘောကျသွားသည် … ဒီကောင်မလေးရဲ့ … ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းက ….. မော်ဒယ်ဆိုဒ်မဟုတ် … လှယဉ်ကျေးမယ်ဆိုဒ် … တောင့်တောင့် ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးဆိုပေမယ့် … ဒီကောင်မလေးလိုမျိုး … အချိုးကျဖို့ မလွယ် … အသက်က ၁၈ နှစ်ဆိုတော့ … ဘူးသီးနုနု … ဖွံ့ဖြိုးစ အရွယ် … မြင်လိုက်တာနဲ့ … စိတတွေ ထကြွလာအောင် … လှတဲ့ကောင်မလေးကို … ချစ်ချင်တယ် … ချစ်ချင်တယ်ဆိုတာထက် … အိပ်ချင်တယ် ဆိုတာက … ပိုမှန်သည် … အိပ်ယာထဲမှာ … မိန်းမတွေက အတူတူပဲ … ဆိုတဲ့ အယူအဆက … မမှန်ဘူးဗျ … မြင်လိုက်တာနဲ့ … ရမက်ထန်စေတဲ့ … ဒီလိုကောင်မလေးနဲ့ … တစ်ညလောက် အိပ်ပစ်လိုက်ရင် … ဟား … အရမ်းလှတဲ့ … ညလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့ … ဒီည ဘာဖြစ်မှန်းကို မသိပါဘူးဗျာ … ရင်ထဲမှာ … အရမ်းကို … ဆန္ဒတွေ ပြင်းပြနေတယ် …။
ရင်ထဲမှာ မီးတောက်နေတယ် ချာတိတ်ရေ … ဟင်း … အခုတော့ … ဒင်းလေးနဲ့ ချစ်လို့မရသေးဘူး … ချစ်လို့ရတဲ့ … ချာတိတ်မလေးတစ်ယောက်ဆီ သွားမှ … ဟာ … မေ့နေလိုက်တာ … ဒီည … သူ့ကို အိမ်မှာ စောင့်ခိုင်းထားတယ် … မြန်မြန်ပြန်မှ … ကားမောင်းတဲ့ ကောင်ကလည်း နှေးလိုက်တာ …”ဟေ့ကောင် … မြန်မြန်မောင်းစမ်းပါကွ” “ဟုတ်ကဲ့ … ဆရာ … ဟုတ်ကဲ့”ဒီကောင်က … ဆရာ့အထာကို နပ်သည် … ကားကို မိုင်ကုန်မောင်းပစ်လိုက်သည် … အိမ်ရောက်တော့ … တပည့်တစ်ယောက်က …”ဆရာ … ဟို … မမ ရောက်နေတယ်””အိုကေ … ငါသိတယ် … ကားသိမ်းလိုက်တော့ … ခြံတံခါးတွေ သေချာပိတ်ထား””ဟုတ်ကဲ့ … ဆရာ”အိမ်ပေါ်ထပ်ကို … အပြေးတက်လာမိသည် … ဟင်း … ရင်ထဲက … ဆန္ဒတွေကြောင့် … သွေးကြောတွေ ပေါက်ကွဲ ထွက်တော့မယ် ထင်ပါရဲ့ …အိပ်ယာပေါ်မှာ … နတ်သမီးလေးတစ်ယောက် … ။
ပါးလွာတဲ့ … ညဝတ်ဂါဝန်လေးအောက်မှာ … မို့မောက်တဲ့ တင်သားတွေက … တောင်တန်းကြီးတွေလိုပါပဲ … သိမ်သွားတဲ့ … ခါးလေးက … ကိုင်ဆောင့်ချင်စရာ … ဂါဝန်လေးက … တိုတိုလေးမို့ … ချာတိတ်ရဲ့ အလှတရားတွေကို လုံအောင်မဖုံးနိုင်ပါဘူး … ဖြောင့်တန်းတဲ့ … ပေါင်တံနှစ်ခုက … ဆင်စွယ်နှစ်ချောင်းပမာ … လှဝင်းနေသည် … မပေါ်တပေါ်ဖြစ်နေတာက … ချာတိတ်ရဲ့ ပန်းလေး … ချာတိတ်က … အနေအထိုင် ပက်စက်တာမဟုတ်ဘူးဗျ … တမင်သက်သက် … သွေးဆောင်နေတာ … မြင်တာနဲ့ … လူကို … ချစ်ချင်လာအောင် … ဖျားယောင်းတဲ့ … မိန်းမလက်နက်တစ်မျိုးပေါ့ဗျာ … ဟား ဟား … အမို့အမောက်တွေက … ကျွန်တော့်ကို ဖိတ်ခေါ်နေတယ်လေ … အရင်နေ့တွေက … ဒီလိုမျိုး … စိတ်ကြွအောင်လုပ်မှ … လုပ်ချင်တာ … ဒီနေ့တော့ … မဟုတ်ဘူးဗျ … အရမ်းလှတဲ့ … သူဇာကြောင့် ကျွန်တော် သွေးဆာနေတာ … မပေါ့်တပေါ်တွေက … စိတ်ရိုင်းတွေကို ထကြွစေတယ်လေ …။
“အစ်ကို … နောက်ကျတယ်နော် … မီးစောင့်နေတာ ကြာလှပြီ … ဟွန့်””ဆောရီးပါ … ချာတိတ်ရယ်”ခပ်ညုညုလုပ်နေတဲ့ … ချာတိတ်မလေး … ခဏနေ … ညုနိုင်ပါ့မလား … ကြည့်ရသေးတာပေါ့ … မွေ့ယာပေါ်ကနေ … ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ … ချာတိတ်မလေးကို … ငုံ့ပြီး နမ်းပစ်လိုက်တယ် … နွုတ်ခမ်းလေးက … ချိုလိုက်တာဗျာ … လက်ကလည်း … ဟိုဖက် … ဒီဖက် … ဟိုကိုင် … ဒီကိုင်ပေါ့ … ညဝတ်ဂါဝန်လေးအောက်က … ပစ္စည်းတွေက … မို့မောက်လွန်းတယ်ဗျာ … တစ်မိနစ်လောက် နမ်းပစ်လိုက်တော့ … အောက်က ချာတိတ်မလေးက … ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဖြစ်နေတယ် …”အို … အစ်ကိုနော် … တွေ့တာနဲ့ ဒါပဲလုပ် … ဟွန့်””အရမ်းချစ်တာကိုး … ချာတိတ်ရဲ့””ချာတိတ် … ချာတိတ်ဆိုပြီး … အရမ်းလုပ်တာကိုတော့ ကြောက်တယ် … အစ်ကိုရယ်””ချာတိတ်က အပေးကောင်းတာကိုး””အိုး … တော်ပါ””ရှက်လို့လား””အိုး … ရှက်လွန်းလို့ သေတော့မယ် … မနေ့ကတုန်းက … အစ်ကို အရမ်းဆိုးတယ်”။
“ချာတိတ်ရဲ့ အဖုတ်က … စီးနေတာပဲနော် … အောက်ကနေလည်း … ကော့ပေးတယ်””ဟိတ် … တော်ပြီ အစ်ကိုနော် … ဟွန့်”။ ချာတိတ်မလေးက … ရှက်လွန်းလို့ ထင်ပါရဲ့ … ကျွန်တော် ဖက်ထားတဲ့ ကြားက … ရုန်းထွက်ပြီး … မျက်နှာကို ခေါင်းအုံးအောက်မှာ … ဖွက်ထားတယ် … ဖင်လေးက ထောင်လို့ပေါ့ … ဟား ဟား …ကော့ထွက်နေတဲ့ … ဖင်နှစ်လုံးက … လုံးကျစ်နေသည် … ချာတိတ်ဆိုပြီး … လျော့တွက်လို့မရ … ပစ္စည်းက တောင့်သည် … ဖင်လေးကို … ဆွဲမလိုက်ပြီး … ကားကနဲ ဖြစ်သွားတော့ … ဖင်နှစ်လုံးကြားက ဖြူမို့မို့ …ေ-ာက်ပတ်လေးက … ဖောင်းကားနေသည် … အဝလေးက နည်းနည်းလေးသာ ဟသည် … နီနီရဲလေး အကွဲကြောင်းလေးကို … တွေ့တာနဲ့ … မစဉ်းစားတော့ဘူး … စိတ်က တအားထန်နေတာမို့လို့ … နွုတ်ခမ်းသားကစ်ကစ်လေးကို … ဆွဲဖြဲပြီး … လက်ညှိုးကို … တဆုံးထိုးထည့်ပစ်လိုက်တယ် …”အား … နာတယ် … နာတယ်”အစိမ်းသက်သက်ကြီး … ထိုးချလိုက်တော့ …။
ချာတိတ်မ ဘယ်ခံနိုင်မလဲ … ထွန့်ထွန့်လူးသွားတယ်လေ … ဘယ်ရမလဲ … ရုန်းမအောင် … ခါးကို … အတင်းဖိထားတော့ … ထလို့မရ … ကြပ်စေးနေတဲ့ … အဖုတ်လေးထဲ … လက်ညှိုးလေးကို … ညှစ်နေတာများ … ကောင်းလိုက်တာဗျာ … တင်းနေတာပဲ … လွုပ်လို့မရအောင် ညှစ်ထားတား … ဒီချာတိတ်မလေးက … နည်းနည်းလောက် နမ်းပစ်လိုက်ရင် … အရည်တွေက … ရွဲနေပြီ … ကောင်းမှာပေါ့ဗျာ … ဒီချာတိတ်မလေးက … ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမှ … ပါကင်ဖောက်ထားတာလေ … ပါကင်ဖောက်တဲ့နေ့ကဗျာ … ဟာဗျာ … အတွေးတွေက … စိတ်ကို အဆုံးစွန်ထန်စေတော့ … လက်ညှိုးလေးနဲ့ … ခပ်ပြင်းပြင်းလေး မွေပစ်လိုက်တယ် … မွေရတာခက်လိုက်တာဗျာ … ဖင်ကို အတင်းရွုံ့ထားတော့ … ခရေပွင့်လေးက … သေးသေးလေး ကြုံ့နေသည် … ဘယ်ရမလဲဗျာ … ခရေပွင့်လေးကို … ဝလုံးလေး ရေးပေးလိုက်တော့ … အဖုတ်က ညှစ်ထားတာ … လျော့သွားသည် …။
“အား … အစ်ကိုရေ … ဟင့် … ဟင့်”ရုန်းလို့မရမှန်းသိတော့ … မရုန်းတော့ … ဒါပေမယ့် … ဖင်လေးကို … စကောဝိုင်းလို … ကော့ကော့ပစ်လိုက်တယ် … ကြိုက်တယ် … ဒါမျိုးမှ … ကြိုက်တာဗျ … အောက်ပေးကောင်းတယ်ဗျာ … ဟိုနှိုက်ဒီနှိုက်နဲ့ … ဒီနားလေးက … အလုံးတွေ အများကြီးတွေ့ရတယ် … အင်း … ဂျီစပေါ့လို့ ထင်တာပဲ … ခပ်သွက်သွက်လေး ပွတ်ပေးလိုက်တော့ … လက်ကိုညှစ်ထားတာများဗျာ … ပြုတ်ထွက်မတတ်ပဲ …”အိုး … အစ်ကို … ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ””အိုး … ဟာာာ …. ဟင့်” “ကောင်းလား””ကောင်းတယ် အစ်ကိုရယ် … အရမ်းကောင်းတယ်””ကြိုက်လား””အင်း … ကြိုက်တယ် … ကြိုက်တယ် … လုပ်ပါတော့ အစ်ကိုရယ် … မီးမနေတတ်တော့ဘူး”ချာတိတ် … ခေါင်းလေးလှည့်ကာ … ကျွန်တော့်ကို လှည့်ပြီး ပြောနေပုံလေးက … ချစ်စရာ … ကျွန်တော်လည်း … တအားလုပ်ချင်နေတယ်ဗျာ … လက်ညှိုးကို … ပြန်ထုတ်လိုက်တော့ … ။
အဖုတ်လေးက … အတင်းညှစ်ထားတယ် … မလွတ်ချင်ဘူးထင်ပါရဲ့ …”အတင်းမညှစ်ထားနဲ့လေ””အိုး … အစ်ကိုနော် … ဟင့်”ချာတိတ် ရှက်သွားလို့ထင်ပါရဲ့ … မျက်နှာ ပြန်ငုံ့သွားပြန်တယ် … ပြန်ထွက်လာတဲ့ လက်ညှိုးမှာ … အရည်တွေ ရွဲရွဲစိုနေတယ် … ချာတိတ်မလေးက … ဒါတစ်ခုတော့ ကောင်းတယ် … အဖုတ်ထဲက … အရည်တွေက ညှီနံ့မနံဘူး … သင်းသင်းပျစ်ပျစ်လေး …။ အဝတ်တွေကို … အမြန်ချွတ်ပြီး … သူ့ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားမှာ … နေရာယူလိုက်တယ် … အောက်ကကောင်က … ထောင်နေတာပဲ … မနေတတ်တော့ဗျာ … နီနီရဲရဲ စိုရွဲနေတဲ့ … အကွဲကြောင်းလေးထဲ … ဒ-်ဖျားကို … တေ့လိုက်တယ် …”အိုး … အစ်ကိုရယ် … ဖြေးဖြေးနော် … ဟင့်”ဖြေးဖြေးလေး ဆိုတာ … ကျွန်တော် မလုပ်တတ်ဘူးဗျ … ခပ်ကြမ်းကြမ်းလုပ်ရမှ … အားရတယ် … ကျေနပ်တယ်ဗျ … ဒ-်ဖျားလေးက … အထဲဝင်တယ်ဆိုရုံလေးရှိသေးတယ် … မီးလေးရဲ့ … အဖုတ်က … အတင်းကို … ဖမ်းညှစ်ပစ်တော့တာပဲ …။
ကြာတယ်ဗျာ … ဆောင့်ထည့်ပစ်လိုက်တယ် … အရည်တွေနဲ့ ရွဲနေတော့ … သိမ့်ကနဲ ဝင်သွားတယ် … ချောချောမွေ့မွေ့တော့ ဟုတ်ဘူး … ဒုန်းကနဲ ဆောင့်ပစ်လိုက်တော့ … ဖင်ကုန်းပေးနေတဲ့ … ချာတိတ်မ … အရှေ့ကို … ငိုက်ကနဲ တိုးသွားသည် …”အိုး … အမေရေ … နာတယ် … အစ်ကိုရယ် … တအားမလုပ်ပါနဲ့ဆို …”ချာတိတ်မလေး … မျက်ရည်လေးတောင် ဝဲသွားသည် … ဟုတ်လည်းဟုတ်တာပဲ … ဂေါ်လီ ၈ လုံးထည့်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်ကောင် … ဝင်ချက်က ပြင်းတာကိုး … နုနုထွတ်ထွတ် အတွင်းသားလေးကို … ဖြဲကားပြီး ဝင်သွားရုံမကဘူး … ဂေါ်လီတွေက … ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပွတ်ဆွဲသွားတော့ … သေမတတ်နာသွားမှာပေါ့ … နာပလေ့စေ … ဒီအချိန်မှာ မညှာနိုင်ဘူး … မိန်းမဆိုတာမျိုးက … အဖုတ်ကွဲအောင် –ိုးမှ … အသည်းစွဲအောင် ချစ်မှာ … ဟား ဟား ဟား …”အား … ဟာာ … ဟာာ … ဟင့် … ဟင့် … နာတယ် … နာတယ် … အဲဒီလို မမွေနဲ့လေ”အဖုတ်လေးက … ကြပ်လွန်းတော့ လုပ်ရခက်တယ်ဗျာ …။
နည်းနည်းချောင်သွားအောင် … မွေပစ်လိုက်တယ် …”ဟင် … ဟင့် … အို … အို … အစ့်ကို … အစ့်ကို … ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ အစ်ကိုရယ် … အရမ်းနာတယ် … ဟင့်”။ ရေနစ်သူတစ်ယောက်လို … ဆွဲမိဆွဲရာ … ခေါင်းအုံးလေးကို … ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားရင်း … အနောက်ကနေ … ဆောင့်သမျှ … မီးလေး ခံနေရှာတယ် … စက်သေနတ်လို … အဆက်မပြတ် … ဆောင့်တာခံရတော့ … နားထင်တွေတောင် ပူထူပြီး … မျက်နှာတွေ နီရဲလာတယ် … မသနားနိုင်ဘူးလေ … အရှိန်က အရမ်းကောင်းနေပြီမို့ … ခါးကို ကိုင်ပြီး … အနီးကပ် ဆောင့်ပစ်လိုက်တယ် … သုံးစက္ကန့်ကို နှစ်ချက်နွုန်းနဲ့ ဆောင့်တော့ … ဘယ်ခံနိုင်မလဲ … အဖုတ်ထဲက … အရည်တွေက … ဒလဟောပေါ့ … ချာတိတ်မလေးက … ကြောက်လွန်းတာလား … ကောင်းလွန်းတာလားမသိဘူးဗျာ … ကျွန်တော့်ဟာကို … ညှစ်ထားတာများ … သားရေကွင်း သုံးပင်နဲ့ စည်းထားသလိုပဲ … စီးနေတာ …။
ဆောင့်လိုက်တိုင်း … အရှေ့ကို နည်းနည်းရောက်လိုက် … အနောက်ကို … ပြန်ကော့ပေးလိုက်နဲ့ … ဒီကောင်မလေးတော့ ဟုတ်နေပါပြီ … နာတယ် … နာတယ်ဆိုပြီး … အတင်းနောက်ကို ဖင်ကော့ပေးနေတာ … အခါ ၅၀ လောက်လည်း ဆောင့်ပြီးရော … မီးလေး အရမ်းထန်လာပါတယ် … ကျွန်တော့် ဦးဆောင်မွုကို … အားမရလို့ ထင်တာပဲ … အတင်း နောက်ကို … ပစ်ပစ်ဆောင့်တယ် … ကြိုက်တယ်ဗျာ … ကိုယ်က … ဆောင့်စရာမလိုပဲ … သူ့ဟာနဲ့ ညှစ်ပြီး … ဆောင့်တာများ … ကောင်းလိုက်တာ … အသံထွက်ပြီးတောင် ငြီးမိတယ် … သူ့ခါးကို … ကိုင်ထားတာ လွတ်ပေးလိုက်တော့ … ဇောင်းကလွတ်တဲ့ မြင်းလိုပဲ … ဆောင့်ရှာတယ် … –ီးကလည်း … ထစ်ထစ် ထစ်ထစ်နဲ့ … ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် … ငြီးသံတွေကလည်း … ဆူညံနေတာပဲဗျာ …”ဟင် … ဟင့် … အို … အို … အစ့်ကို … အစ့်ကို …””အရမ်းကောင်းတယ် … အစ်ကိုရယ် … လုပ်ပါ … လုပ်ပါ …”
လုပ်ပါ … လုပ်ပါဆိုပြီး … သူချည်းပဲ လုပ်နေတာ … ဟား ဟား … သဘောတွေ ကျလွန်းလို့ … ဖင်လေးကို ဆွဲဖြဲလိုက်တယ် …”အိုး … အစ်ကိုနော် … အတင်းမဖြဲနဲ့ … ဟင့်”မီးလေးက အဖုတ်ကို … ညှစ်ထားလွန်းတော့ … ဖင်နှစ်လုံးကြားထဲက … ခရေပွင့်လေးက … ခပ်စူးစူးလေး … အထဲကို ဝင်နေတယ် … အရည်တွေလည်း ရွဲနေတော့ … စိတ်မကူးတော့ပါဘူး … လက်ညှိုးကို ထိုးထည့်ပစ်လိုက်တယ် … ဝင်ဘူးဗျ … လက်တဆစ်ပဲ … ဝင်တယ် … ထပ်သွင်းလို့မရဘူး … အတင်းတံခါးပိတ်ထားတယ် …”အား … နာတယ်နော် … အစ်ကို … ဟင့် … ဟင့်””အား … နာတယ် … နာတယ် … ထပ်မထည့်တော့နဲ့ … နာတယ် …”မထည့်နဲ့ ဆို … ပိုလို့တောင် ထည့်ချင်သေးတယ် … အပြတ်ဟော့နေတဲ့ … မီးလေးကို … နောက်ပေါက်ပါ လုပ်ပစ်လိုက်အုံးမယ် … လက်ညှိုးကို … ပိုထိုးထည့်တော့ … အတင်း ရုန်းတယ် … မရဘူးလေ … လိုချင်တာကို … ရအောင် ယူတတ်တဲ့ အကျင့်က … ကျွန်တော့်မှာ စွဲနေပြီ …။
“အား … အစ်ကိုက … အရမ်းရက်စက်တယ်ကွာ … မီးလေး ဖင်ကို … မလုပ်ပါနဲ့ “”အရမ်းလုပ်ချင်တယ်ကွာ … မီးလေးကလည်း” “ဟင့် … ဟင့် … မီးလေးကို … မသနားဘူးလားဟင် … အစ်ကို့ဟာကြီး ထည့်လိုက်ရင် … မီးလေးဖင်ကွဲသွားလိမ့်မယ်””မကွဲပါဘူးကွာ …” “တခြားဟာ လုပ်ပေးမယ်လေ … နော် … အစ်ကို … ဒါတော့ မလုပ်ပါနဲ့ အစ်ကိုရယ် … မီးလေး တောင်းပန်ပါတယ်””ဟာကွာ”ကျွန်တော် စိတ်တိုလာလို့ … ကျွန်တော့်ဟာကို … ဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်တယ် … အရမ်းကောင်းနေတဲ့ အချိန်မှာ ကန့်လန့်ကန့်လန့် လုပ်တာ မုန်းတယ်ဗျာ … မွေ့ယာပေါ်ကို ပစ်လှဲချပစ်လိုက်တယ် … မီးလေးက … သနားပါတယ် … မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ … ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပြီး …”စိတ်မဆိုးရဘူး အစ်ကိုရယ် … မီးလေး ကြောက်လို့ပါ …” “ဘာကို ကြောက်နေတာလဲ””အစ်ကို့ဟာကြီး … အကြီးကြီးလေ … မီးလေ ဖင်ကွဲသွားမှာပေါ့””ဟာကွာ”။
“စိတ်မဆိုးနဲ့နော် … အစ်ကို့ကို အလျော်ပြန်ပေးမယ်လေ … နော် … ရွတ်”ပါးကို တစ်ချက်လာနမ်းပြီး … နှစ်သိမ့်ပေးနေရှာတယ် … စိတ်တိုနေတာ … လျော့သွားတာပေါ့ဗျာ … ဒီလိုမျိုးလေး နမ်းတော့ … ရင်တောင်ခုန်သွားတယ် … သူက ဘယ်လို အလျော်ပေးမှာလဲ …”ဘယ်လို အလျော်ပေးမှာလဲ … ပြောပါအုံး””စိတ်ကို လျှော့ပါ … အစ်ကိုရယ် … လူကြီးနော် … ကလေးကို စိတ်မဆိုးရဘူး … ဟွန့်” “မရဘူးကွာ … အရမ်းလုပ်ချင်တယ်””မီးလေးကို … မသနားဘူးလားဟင် … မနေ့က … ဒဏ်ရာတောင် မပျောက်သေးဘူး … အထဲမှာ အောင့်နေသေးတာ””ဟုတ်လား””ဟုတ်တာပေါ့ … မီးလေးက လိမ်ပြောစရာလား … အစ်ကို ကြမ်းကြမ်းလုပ်တာ … အရမ်းနာတယ် အစ်ကိုရဲ့ … မီးလေးက … ချစ်လွန်းလို့ … အံကြိတ်ခံတာ … မျက်ရည်တောင်ထွက်တယ် … ဟွန့်””ဟား ဟား … မီးလေးက … အရမ်းကောင်းတာကိုး … ဟုတ်ဘူးလား””အိုး တော်ပါ … စိတ်ကို လျှော့နော် …။
အစ်ကို စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်ရစေ့မယ် … ဟုတ်ပြီလား … ရွတ်””အင်း … ပြောပါအုံး … ဘယ်လို အလျော်ပေးမှာလဲ …””စောင့်ကြည့်ပေါ့ … မီးလေး ဘယ်လိုချစ်တတ်တယ်ဆိုတာ … “တယ်ဟုတ်ပါလား … အပြောကတော့ ကြွေလောက်တယ် …. ခပ်ညုညုလေး ပြောပြီး … ကျွန်တော့်နွုတ်ခမ်းကို … မထိတထိ လာကလိပြန်တယ် … ပက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ … ကျွန်တော့် အပေါ်ကို … မီးလေး … တက်လာပါတယ် … အိစက်ဖောင်းမို့နေတဲ့ … ရင်နှစ်မွာက … မျက်နှာရှေ့မှာ … ရစ်ဝဲနေတယ် … သူ ဘာလုပ်ပေးမှာလဲ …။ “အစ်ကို မျက်စိမှိတ်ထားရမယ်နော်””အင်း”မျက်စိမှိတ်လိုက်ပေမယ့် … ခိုးကြည့်ချင်တယ်ဗျာ … မျက်စိတစ်ဖက်ကို မှိတ်ပြီး … ခိုးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ … ချစ်ရည်လွမ်းတဲ့ မျက်ဝန်းတွေက … ကျွန်တော့်ကို … စိုက်ကြည့်နေတယ် …”ဟိတ် … အစ်ကိုနော် … ခိုးကြည့်နဲ့””အင်းပါ”မျက်နှာကို ခေါင်းအုံးနဲ့ ဖုံးပစ်လိုက်တယ် … ဟား ဟား … ချာတိတ်က ကလေးကျနေတာပဲ …။
ခေါင်းအုံးနဲ့ ဖုံးတော့ အောက်နားလေးက … မသိမသာလေး … ပွင့်နေတာ … သူလုပ်နေတာ မြင်ရတာပေါ့ဗျာ … ခေါင်းလေးငုံ့ … ဆံပင်လေးကို သပ်လိုက်ပြီး … ကျွန်တော့်နို့သီးဖျားလေးကို … စို့တော့ာတာပဲဗျာ … ရင်ထဲမှာ … လှိုက်ကနဲ … ကြက်သီးတွေတောင်ထသွားတယ် … မီးလေးလျှာလေးနဲ့ … သပ်လိုက်တိုင်း … ဟား … ရင်ထဲမှာ မီးတွေ ဝုန်းကနဲ ဝုန်းကနဲ တောက်လာတယ် … မရဘူးဗျာ … ခံစားရခက်တယ်ဗျာ … သူ့လျှာလေးက … နွေးနွေးလေး … မထိတထိနဲ့ … ကလိတော့ … ကောင်းလိုက်တာဗျာ … ဒီဘက်ပြီးတော့ … ဟိုဘက် … နွုတ်ခမ်းလေးနဲ့ စုပ်ရင်း … မီးလေးက … သူ့ဖင်ကောက်ကောက်လေးကို နောက်ကို ဆုတ်ပစ်လိုက်တယ် … ဟာဗျာ … တင်းပြီး ထောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့ကောင်က … သူ့ ဖင်နှလုံးကြားမှာ ညပ်သွားတယ် … ချွဲကျိတဲ့ အရည်တွေနဲ့ … ကျွန်တော့်ကောင်ကလည်း … အပွတ်ခံနေရတယ် … ဟာဗျာ … တကယ်ပါပဲ …။
အပွဲပွဲနွဲလာသမျှ … ဒီတစ်ခါကျမှ … မီးလေး လုပ်သမျှ ကျွန်တော် ထွန့်ထွန့်လူးနေတာပဲဗျာ … –ီးတစ်ချောင်းလုံးကို … အဖုတ်မွေးနုနုလေးနဲ့ … အပွတ်ခံရတာ … ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိပါဘူးဗျာ … တစ်ချက်တစ်ချက် … သူ့အဖုတ်ကြားလေးထဲရောက်သွားလိုက် … နွုတ်ခမ်းထူထူလေးတွေက … မထိတထထိညှစ်တာခံရလိုက်နဲ့ … ဟုတ်နေတာပဲဗျာ … –ီးတချောင်းလုံးကို … အဝတ်နုနဲ့ ပွတ်နေသလိုပဲဗျာ … မီးလေးဖင်က နိမ့်ချည်မြင့်ချည်နဲ့ … ကျွန်တော့်ကို နှိပ်စက်နေတာ … မခံစားနိုင်တော့ဘူးဗျာ … ဖင်ကို အနောက်ဖက်ကို အတင်းပွတ်တွန်းရင်း … ဒ-်ဖျားကို … လာလာငြိတယ်ဗျ … ဝင်မလိုလို ဖြစ်လိုက် … အောက်ပြန်ဆင်းသွားလိုက် … အသဲယားတယ်ဗျာ … မီးလေး အပေါက်ထဲ … ဝင်တော့မလို … ဖြစ်လိုက် … အောက်ကနေ အတင်းကော့တော့လည်း … ချာတိတ်မက … အောက်ပြန်လျှောသွားတယ် … ဒီလိုမျိုး နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဆိုတော့ … တင်းလာတာပေါ့ဗျာ …။
နောက်ဆုံးအကြိမ်မှာ … မရမက အောက်ကနေ ပင့်တင်လိုက်တော့ … စွတ်ကနဲ ဝင်သွားတယ် … မီးလေးရုန်းပါသေးတယ် … မရဘူးလေ … အံတိုနေပြီ …”ဟာာာာ … ကြီးလိုက်တာ အစ်ကိုရယ် … ဟင့်””အရမ်းရှည်တာပဲ … အစ်ကိုရယ် … အား ….. “မီးလေး … တစ်ချက် တုန့်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ် … ဆက်ဖြစ်လာမယ့် … နာကျင်ခံကောင်း အရာသာကို … ကြိုသိနေတော့ … နည်းနည်းတော့ လန့်မှာပေါ့ … ကျွန်တော်လည်း စိတ်မရှည်တော့ဘူးဗျာ … လုပ်ချင်နေပြီ … လက်နှစ်ဖက်နဲ့ မီးလေးဖင်လေးကို … ကိုင်ပြီး … ဝုန်းကနဲ ဆောင့်ချပစ်လိုက်တယ် … အောက်ကနေလည်း … အတင်းကော့ပစ်လိုက်တယ် …”အား … အား … နာတယ် … အရမ်းနာတယ် အစ်ကိုရယ်””ဟာာာာာာာ””အာာာာ … အရမ်း မကြမ်းရဘူးလေ … မီးလေး ကို မသနားဘူးလား … ဟင့် … “အသံထွက်ပြီး ငြီးရလောက်အောင် … မီးလေ အဖုတ်ထဲ ထစ်ထစ် ထစ်ထစ်နဲ့ ဝင်သွားတာ … မိုက်တယ်ဗျာ …။
ထောင်မတ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကောင်ကို … ညှစ်ထားတာကို … အရမ်းသဘောကျတယ် … အိကနဲ ကျလာတဲ့ တင်ပါးတွေက … ကျွန်တော့်ပေါင်တွေနဲ့ လာကပ်သွားတယ် … မီးလေး … ဆတ်ကနဲ … သူ့ဖင်လေးကို … ပြန်မသွားတယ် … အဖုတ်က … အကုန်လုံး ကျွတ်ထွက်မသွား … သိမ့်ကနဲ … ပြန်ဆင်းလာပြန်တယ် …။ “ဟင့် … ဟင့် … အစ်ကိုရယ် … ကောင်းရဲ့လားဟင်””ကောင်းတယ် မီးလေးရယ် … ခပ်ကြမ်းကြမ်း … ချစ်ကွာ … အားမရဘူး””အစ်ကိုရယ် … ဟာ … ဟင့် … ဟာ … ဟာ … အို … အစ်ကိုနော် … အု … ဟင့် …”မီးလေးက … ကျွန်တော့် ရင်ဘတ်ကို လက်ထောက်ပြီး … ဖင်လေးကို … ကော့လိုက် … ကောက်လိုက်နဲ့ … အပေါ်ကနေ ဆောင့်တာ ကောင်းတယ်ဗျာ … တစ်ချက်တစ်ချက် … မာန်ပါသွားတယ်ထင်ပါရဲ့ … အဆုံးထိ … ဒုန်းကနဲ ဆောင့်ဆောင့်ဝင်သွားတယ် … သူလုပ်တာ နည်းနည်းတော့ နှေးတယ်ဗျာ … အားမရတော့ဘူး …။
ဟူး … ခါးလေးကို ကိုင်ပြီး … မကုန်းမကွပုံလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ … အောက်ကနေ အတင်း ဆောင့်ပစ်လိုက်တယ် … စက်သေနတ်လို … တဒုန်းဒုန်းနဲ့ကို ဆောင့်ပစ်တာ … အဝင်အထွက်ကလည်း ကြမ်းတော့ … မီးလေး အော်လိုက်တာ ပြောမနေနဲ့ … ခံရှာပါတယ် … သူ့အစေ့လေးကို … ပွတ်ပွတ်ဆွဲသွားတာ … ကောင်းလွန်းလို့ ထင်ပါရဲ့ … အဖုတ်ထဲကနေ အတင်း ညှစ်ညှစ်ထားသေးတယ် … အရည်တွေကလည်း … ရွဲရွဲစိုနေတာပဲဗျာ … အဝင်အထွက်သံတွေက … နည်းနည်းတောင်ကျယ်လာတယ် … “ဟာ … ဟင့်” “ဟင့် … ဟင့်” “အွန် … ဟာာာ” “အားး … ရှီး” အောက်ကနေ ဆောင့်ရင်း … ကပ်နေတဲ့ ဆီးခုံ နှစ်ခုကြားထဲ လက်ဝင်ပြီး … မီးလေးအစေ့လေးကို … ပွတ်ပစ်လိုက်တယ် … “ဟား … ထိတယ် အစ်ကိုရယ် … အရမ်းထိတယ်” ပဲစေ့သာသာအစေ့လေးကို … ပွတ်ပေးလိုက်ရင် … မိန်းမတွေ မနေနိုင်အောင် … ထွန့်ထွန့်လူးဖြစ်သွားတာပဲဗျာ …။
စိတ်မပါတဲ့ မိန်းမ … ကာမစိတ်နည်းတဲ့ မိန်းမတွေတောင် … ဒါလေးကို ပွတ်ပေးရင် … မနေနိုင်လောက်အောင်ကို … ထကြွလာလိမ့်မယ် … မယုံရင်လုပ်ကြည့်ပေါ့ … အသက်ကလည်း ငယ်ငယ် … သွေးကြွခါစ … မီးလေးလို အရွယ်မျိုးကို … ဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်ပစ်လို့ကတော့ … အသည်းစွဲအောင် ချစ်သွားလိမ့်မယ် … မီးလေးက … တော်တော် အောက်ပေးကောင်းတာဗျ … အစေ့လေးကို အပွတ်ခံရတိုင်း … ဖင်လေးကို စကာဝိုင်းလို ကော့ကော့ပစ်လိုက်တာများ … ကောင်းလိုက်တာဗျာ … နောက်ပြီး … မီးလေးအဖုတ်က … ကျွန်တော့-ီးကို … ဆွဲဆွဲ ဆုပ်ပစ်တာလဲ … ကောင်းတယ်ဗျာ … “အား … ရှီး …. ဟင့် … အစ့်ကို့ … အစ့်ကို့ … မီးကို သတ်နေတာလားဟင် … မီး မခံနိုင်ဘူး … ဟီး … မီးသေတော့မယ် … ဟင့် … မီးကို သနားပါအုံး … အစ်ကိုရယ် … အား …. ရှီး … ဟာ … ဟင့် … အား … သေပြီ … သေပြီ …” “ဟင့် … အဲလို … မပွတ်ပါနဲ့ … အစ်ကိုရယ် … မီးမခံနိုင်လို့ပါ … နော် … ဟင့် …။
ပြောလို့လဲမရဘူး … အို … အာာာ … ရှီး … မီး … သေပြီ … မီး … သေပြီ …” တဖွတ်ဖွတ်နဲ့ အောက်ကဆောာင့်ရင်း … မီးလေးအစေ့ကို … ပွတ်ပွတ်ပစ်တာ … မီးလေးတစ်ယောက် အပေါ်မှာ … ထွန့်ထွန့်ကို လူးနေတာပဲ … ဘယ်ခံနိုင်မလဲဗျာ … ၀ါရင့်တဲ့ … ဖာသည်တွေတောင် … အသည်းခိုက်အောင် … ခံရတဲ့အကွက် … ပါကင်ဖောက်ပြီးစ … ချာတိတ်မက … ခံနိုင်မတဲ့လား … မီးလေးအဖုတ်က ညှစ်ထားတဲ့ အားက … သံချောင်းဆို … ကွေးသွားမလား မသိပါဘူးဗျာ … ညှစ်ထားတဲ့ ကြားက … မွေရတာ … တအားဖီးလာတယ်ဗျ … အရည်တွေကတော့ … ဟောကနဲ … ဟောကနဲ ထွက်ကျလာတာ … အစေ့ပွတ်နေတဲ့ … လက်ထဲမှာတောင် … အိုင်နေပြီ … “ဟင့် …. ဟင့် … ရှီး … ကောင်းတယ် အစ်ကိုရယ် … အဲလိုလေး … အဲလိုလေး … ရှီး … မြန်မြန်လုပ်နော် … အို … ဟင့် … မီးလေးပြီးတော့မယ် …. ပြီးတော့မယ် … ရှီး … ဟာ … ဆောင့်ဆောင့်”။
ဆယ်မိနစ်လောက် … အောက်ကနေ ပင့်ပြီး … ဆောင့်ချက် … ကြမ်းကြမ်းနဲ့ ကြုံးတော့ … မီးလေးအဖုတ်က … ထွက်လိုက်တဲ့ အရည်တွေဗျာ … အိုင်ထွန်းနေတာပဲ … ကျွန်တော်လည်း … မနေနိုင်တော့ဘူး … ပြီးတော့မယ် … သူက … မွေလိုက် … ကျွန်တော်က မွေလိုက်နဲ့ … ကောင်းလိုက်တာဗျာ … “အား … ရှီး … ဟင့် … ဟင့် … အရမ်းချစ်တယ် … အစ်ကိုရယ် … အရမ်းချစ်တယ် … မီးလေ … မီးလေ … အား … ” မီးလေး … စကားတွေက ဗလုံးဗထွေး … တစ်ကိုယ်လုံးကလည်း … တွန့်လိမ်ပြီး … ပြီးသွားတယ် … ပြီးခါနီး … မီးလေးအဖုတ်က … ဆတ်ကနဲ … ဆတ်ကနဲ … ညှစ်ညှစ်ပစ်တာ … ကောင်းလိုက်တာဗျာ … အထဲကနေ ဆွဲဆွဲဆုပ်နေတဲ့ အရသာက … ဘာနဲ့မှမတူဘူးဗျ … တောင့်မခံနိုင်တော့ဘူးဗျာ … ခါးကို စုံကိုင်ပြီး ဆောင့်ချပစ်လိုက်တယ် … အောက်ကနေ အတင်းပင့်ပြီး … သုံးလေးချက်မွေလိုက်ရင်း … ပြွတ်ကနဲ … ကျွန်တော့်ဟာထဲက … အရည်တွေ ပန်းထွက်သွားတယ် …။
“အို … အစ်ကိုရယ် …. အရမ်းချစ်တယ်နော် … ဟင့် … အို … အစ်ကို့အရည်တွေက … မီးသတ်ပိုက်ကျနေတာပဲ … မီးသားအိမ်ထဲကို … ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တာ … ကောင်းတယ် … အစ်ကိုရယ် … ကောင်းတယ် … အစ်ကိုရော ကောင်းရဲ့လားဟင်” “အင်း” နှစ်ယောက်လုံး … ပန်းတိုင်အရောက် … တာဝေးပြေးလာတဲ့ အပြေးသမားတွေလို … မောဟိုက်နေတာပဲ … ဟောဟဲ … ဟောဟဲနဲ့ … နှစ်ယောက်သား … ပက်လက်ကလေး … မီးလေးက … နည်းနည်းတော့ … ချွဲတတ်သည် … ကျွန်တော့် လက်မောင်းကို … ခေါင်းအုံးအုံးပြီး … ကျွန်တော့်ကို ဖက်ထားလိုက်တယ် … “အစ်ကို စိတ်ကျေနပ်ရဲ့လားဟင်” “ဟင့်အင်း” “ရှင်” မီးလေး မျက်နှာ ငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်သွားသည် … “အစ်ကိုနော် … ဟင့် … မီးလုပ်ပေးတာ … စိတ်တိုင်းမကျဘူးလားဟင် … မီးက သိပ်မချစ်တတ်သေးလို့ပါ … အစ်ကိုရယ် … ဘယ်လိုလုပ်မှ စိတ်ကျေနပ်မှာလဲဟင်” “ဖင်ချချင်တယ်”။
“အို … အစ်ကိုရယ် … မီးကို … မသနားဘူးလားဟင် … မီးဖင်ကွဲသွားမှာ အရမ်းကြောက်တယ်” “မရဘူး … ချမှာပဲ…” “ဟင့် … အစ်ကို … အရမ်းဆိုးတယ် …” “ဖင်ကုန်းပေးကွာ … လုပ်ချင်လာပြီ” “ရှင် … ဟင့်အင်း … ဟင့်အင်း” “မနာပါဘူးကွ … မီးလေးကလည်း … လိမ္မာတယ်နော် … အစ်ကို ဖြေးဖြေးလေး ထည့်ပေးမယ်” “အစ်ကိုက … ညာပြောတယ် … မီးကို … ဖင်ချမှာ … မနာပဲ နေမှာလား … မီးဖင်လေးက … သေးသေးလေး … အစ့်ကို့ဟာက … အကြီးကြီး … ကွဲသွားမှာပေါ့ … ဟင့်အင်းနော် … မလုပ်ပါနဲ့နော် … ” “ဖြေးဖြေးလေး လုပ်မှာပါဆို … ရုန်းရင်တော့ အတင်းချပစ်မှာနော် … ဖင်ကွဲတော့မှ မအော်နဲ့ …” “ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဟင်” “ဖင်ကုန်းလိုက်နော်” “ဟင့်” မီးလေး … မကုန်းချင်ကုန်းချင်နဲ့ ကုန်းပေးလိုက်သည် … ပေါင်ကြားမှာက … အရည်တွေက မခြောက်နိုင် … အိုင်ထွန်းနေအောင် ထွက်ထားတော့ … ဘယ်ခြောက်နိုင်အုံးမလဲဗျာ … မီးလေးက … ဖင်ကုန်းပေးပြီး … အနောက်ကို လှည့်လှည့်ကြည့်နေတယ် …။
ဟုတ်မှာပေါ့ … သူ့ခမျာ ကြောက်နေရှာမှာ … စအိုဝသေးသေးလေးထဲ … ကျွန်တော့်-ီးထည့်မှာဆိုတော့ လန့်နေမှာပေါ့ … ခုတင်ဘေး ခုံပေါ်က … နားကြပ်တံ သုံးချောင်းကို ယူလိုက်သည် … မီးလေး ဖင်ကို … ခပ်စပ်စပ် နှစ်ချက်သုံးချက် ရိုက်ပစ်လိုက်တယ် … “ဖတ် … ဖတ် … ဖတ်” “အား … အစ်ကိုနော် … ဟင့် … နာတယ် … ဘာလို့ ရိုက်တာလဲဟင် … ” “ဖင်လေးက … အရမ်းလှလို့ …” “မီးဖင်ကို … ကြိုက်လား …” “ကြိုက်တယ်” မီးလေး စအိုဝက … သေးသေးလေး … သန့်ရှင်းရေး လုပ်ထားတော့ … ဖြူဝင်းနေသည် … စအိုဝလေးကို … နည်းနည်းဖြဲလိုက်တယ် … “အို … အစ်ကို … အရမ်းမဖြဲနဲ့လေ … ဟင့်” နားကြပ်တံလေးကို … စအိုလေးထဲ တွန်းထည့်လိုက်သည် … ပြွတ်ကနဲ … ပြန်ကန်ထွက်လာသည် … မီးလေး … အလန့်တကြား ညှစ်ထည့်လိုက်တော့ … နားကြပ်တံလေးက … ပြန်ထွက်လာသည် … “အို … အစ်ကို … ဘာထည့်လိုက်တာလဲ … ဟင့် … ရှီး”။
“စိတ်ကို လျှော့ထားနော် … မီး … မနာပါဘူးကွာ … ခေါင်းထောင်မထားနဲ့လေ … အင်း ဟုတ်ပြီ … မှောက်ပြီး … ကုန်းထားပေး” “အို … အစ်ကိုနော် … ဖြေးဖြေး” “အင်းပါ” နားကြပ်တံလေး … ဝင်သွားပြန်တယ် … မီးလေး ဖင်က … တွန့်ကနဲ … တုန်သွားတယ် … ဖြေးဖြေးလေး မွေပစ်လိုက်တော့ … ဖင်လေးက … ယမ်းချင်နေတယ် … ယားမှာပေါ့ … ခံရခက်မှာပေါ့ … “အို … ဟင့် … အစ်ကို …” မီးလေး ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ … ကျွန်တော့်လက်ကို … လာကိုင်တယ် … တစ်ချောင်း ဝင်သွားတော့ … နောက်တစ်ချောင်း … “အို … အမေ့ … ရှီး” သုံးချောင်းမြောက်ကို ထည့်လိုက်တော့ … မီးလေး … ဖင်လေးက တုန်ခါနေသည် … ယမ်းခါနေသည် … ဖြေးဖြေးလေး မွေပစ်လိုက်သည် … အဖုတ်ကို … လုပ်ရတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ … ဖင်ကိုချရတဲ့ … ခံစားချက်က တူဘူးဗျ … ဖင်ချတာကို ပိုသဘောကျတယ်ဗျ … ပါကင်ပိတ် အဖုတ်လေးကို … လုပ်ဖို့ နွူးနှပ်ရသလိုမျိုး … အနောက်ကို ချရင်လည်း … နွူးနှပ်ရတယ်ဗျ …။
အဖုတ်ကမှ အတင်းလုပ်ရင် … ဝင်သွားသေးတယ် … အနောက်က မဝင်ဘူးဗျ … စအိုကြွက်သားတွေက … ပိုပြီးသန်မာတော့ … အထဲရောက်သွားရင်လည်း … အညှစ်ခံရတာ … ပိုထိတယ်ဗျ … “ဟင့် … ဟင့် … အစ်ကို …. ဖြေးဖြေးမွေနော် … မီးမခံနိုင်ဘူး … အသဲယားတယ် … အစ်ကိုရယ် … ဟင့် … မနေတတ်ဘူး … အို … အို” “ဟာ … ရှီး … ဟင့် … အဲလိုမရက်စက်နဲ့လေ … အို … အစ်ကို … အစ်ကို … အစေ့လေးကို မပွတ်ပါနဲ့ဆို … ဟင့် … မီး … သေပြီ … သေပြီ … အရမ်းခံရခက်တယ် … အစ်ကိုရယ် … မီးတောင်းပန်ပါတယ်နော် … အို … ဟင့် …. ဟင့်” တောင်းပန်လေ … ခပ်ကြမ်းကြမ်းမွေလေပဲ … တော်သေးတယ် … မီးလေးက … အိုးကောင်းလို့ … အိုးပိန်လေးများဆိုရင် … အသက်ထွက်လောက်တယ် … ကျွန်တော်က … အိုးတောင့်တောင့် ချာတိတ်တွေကို … သဘောကျတယ်ဗျ … အိုးတောင့်တဲ့ စော်တွေကို … ချရတာ ပိုဖီးလာတယ် … အောက်ပေးလဲ ပိုကောင်းတယ်ဗျ …။
ဖင်ကြီးရင် … စိတ်ကြီးတယ်တဲ့ … ဟား ဟား … “ဟာ … ဟာ … ဟင့် … ထွက်ကုန်ပြီ … ရှီး … အစ်ကိုရယ် … ဟင့် … ဟင့် … ရှီး … ထွက်ကုန်ပြီ … ဟင့် … တော်ပါတော့နော် … မီးသေတော့မယ် … ဟင့် … နားထဲမှာ … နားကြပ်ရင်တောင် … တခါတလေ … ထွန့်ထွန့်လူးသွားတာ … နားကြပ်တံမှာ ပါတဲ့ ဂွမ်းလေးက … နုတယ်ဆိုပေမယ့် … စအိုဆိုတာမျိုးကလည်း … အသားနုပဲလေ … အသွေးအသားတွေ ပြောင်းဆန်နေအောင် … ခံရခက်မှာပေါ့ … ကျွန်တော့်လက်ထဲကို … မီးလေး အရည်ပူတွေ … ကျလာတယ် … ပွက်ကနဲပဲဗျာ … ကျလည်း … ဆက်မွေရအုံးမှာပဲ … နည်းနည်းထပ်မွေပြီးတော့ … နားကြပ်တံလေး သုံးချောင်းကို … ထုတ်လိုက်တယ် … နားကြပ်တံ … ဒီဘက်အခြမ်းက … အရည်တွေနဲ့ … စိုနေပြီလေ … မီးလေးက … မလုပ်ပါနဲ့တော့ … မလုပ်ပါနဲ့တော့ … တောင်းပန်သာနေတယ် … စအိုလေးက … ပေးမထုတ်ချင်ဘူးဗျ … နားကြပ်တံလေး … လွတ်သွားမှာ စိုးလို့ … ညှစ်ထားတယ် …။
ဖြေးဖြေးလေး ထုတ်ကြည့်တယ် … မရဘူး … စအိုလေးက … စူပြီးလိုက်ပါလာတယ် … ပြန်ထည့်လိုက်တယ် … ဆတ်ကနဲ ဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်တော့လဲ … “အို … အမေ့” မီးလေးကို … ကြမ်းကြမ်းလုပ်မှပဲရတော့တယ် … ခြောက်နေတဲ့ … ဒီဘက်ပိုင်းနဲ့ ထပ်ထိုးထည့်ပစ်လိုက်တယ် … ပြီးတော့ … မွေလိုက်တယ် … အစေ့လေးကိုလည်း … ပွတ်နေဆဲ … “အို … အစ်ကို … ဟာ … ဟာ” အခါ နှစ်ဆယ်လောက် ခပ်ကြမ်းကြမ်းလုပ်လိုက်တော့ … နောက်တစ်ခါ … မီးလေး … အရည်တွေ ထပ်ကျလာပြန်တယ် … အိုကေ … ဒီအချိန်က … အချိန်ကောင်းပဲ … ကာမအသာထိပ်ဆုံးရောက်သွားလို့ … မီးလေး မိန်းမောနေတုန်း … အပေါက်ကို … ထပ်ချဲ့ပစ်ရမယ် … ဒီလောက်ဆိုရင် … ရလောက်ပြီထင်တယ် … နားကြပ်တံလေးတွေကို … ဆွဲနွုတ် … လက်ညှိုးကို … ဖြေးဖြေးလေး … တစ်ဆစ်ချင်းထည့်ပစ်လိုက်တယ် … “အား … နာတယ် … ဖြေးဖြေး … အစ်ကို ဟင့်” ။
“လက်ညှိုးက … မဆုံးသေးဘူးလားဟင် … နာလိုက်တာ အစ်ကိုရယ်” “ဝင်သွားပြီ … မီးလေး … အကုန် ဝင်သွားပြီ … မီးလေးက တော်လိုက်တာ” မီးလေး … စကားတောင် ပြန်မပြောနိုင် … မျက်နှာကို ရွုံ့မဲ့နေပြီး … မွေ့ယာခင်းကို … ကျစ်ကျစ်ပါအောင် … ဆုပ်ထားတဲ့ လက်သီးဆုပ်လေးက … လက်ဆစ်ဖြူဖြူလေးတွေတောင်ပေါ်နေတယ် … နည်းနည်းတော့ သနားသွားတယ် … ဒါပေမယ့် … ဆက်လုပ်ရမှာပဲ … မီးလေးနေရာမှာ … သူဇာဆိုရင်ဗျာ … ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ … အတွေးက … သွေးဆိုးတွေကို … မြှောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်ပေးနေတာ … ခပ်ဆတ်ဆတ် မွေပစ်လိုက်တယ် … “အား … နာတယ် … နာတယ် …” “အား … အား …” မီးလေး ဖင်က … ထွန့်ထွန့်လူးပြီး … ယမ်းခါနေတယ် … ရုန်းတယ်ဆိုပေမယ့် … အပိုင်ချုပ်ပြီး … လုပ်တော့ … ဖင်ပဲ ယမ်းလို့ရတာပေါ့ … ဖင်ယမ်းလေ … ပိုခံရခက်လေပဲ … ကိုယ်ကလဲ မွေ … သူကလည်း ယမ်း …။
မီးလေး ဘယ်လိုခံစားရလဲမသိပါဘူးဗျာ … ကျွန်တော့်ကောင် … အရမ်းတင်းနေတယ် … လက်ညှိုးကို … ဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်တယ် … ပြီးတော့ ဖင်လေးကို … ဆွဲထောင်ပြီး … စိတ်ကြိုက်ပုံစံချပြီး … နောက်ကနေ … အပေါက်ဝကို … ဒ-်ထည့်ပြီး … ဆောင့်ချပစ်လိုက်တယ် … ဆောင့်လိုက်တာ … ကြမ်းသွားတယ် … ဝုန်းဆို … မီးလေး … အရှေ့ကို … ရောက်သွားတယ် … ဒါပေမယ့် … မလွတ်ပါဘူးဗျ … ကျွန်တော့်လက်နှစ်ဖက်က … ခါးကို သေချာကိုင်ထားတော့ … ရုန်းမရဘူးလေ … မီးလေးကတော့ … တအီးအီး … တအားအားနဲ့ … ထုံးစံအတိုင်း ငြီးတွားနေတာပဲဗျာ … သုံးလေးချက် … ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်ပြီး … စအိုလေးကို … ဆွဲဖြဲကြည့်လိုက်တယ် … မီးလေး ဗိုက်အောက်ထဲ လက်လျှိုပြီးတော့ … အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကို … ညှစ်တယ် … အစေ့ကိုလည်း ပွတ်တယ် … စအိုထဲကိုလည်း … လက်တစ်ချောင်း ထည့်ပစ်လိုက်တယ် “အား … အား … အစ်ကို … မီး သေပြီ … မခံနိုင်ဘူး … ဟီး … ဟီး … အရမ်းနာတယ် … အရမ်းနာတယ် …” ။
မီးလေး … တအားရုန်းတာ … ရုန်းလည်း မရဘူးလေ … အပိုင်ချုပ်ထားတော့ … ရုန်းလေပိုဆိုးလေပဲ … အဖုတ်၊ ဖင်၊ အစေ့ … သုံးနေရာ ဆက်တိုက်ကြီး … အလုပ်ခံရတော့ … ဘယ်ခံနိုင်မလဲ … ဖာသည်တောင် အမေခေါ်ရမယ့် … အကွက် … အဖုတ်ထဲဝင်တဲ့ … –ီးကလည်း … ကြမ်းသလားမမေးနဲ့ … အဝင်အထွက် … တဇွတ်ဇွတ်နဲ့ … ဂေါ်လီတွေက … အသားကုန် ပွတ်နေတာ … မီးလေး … မောလွန်းလို့ ချွေးတွေတောင် ထွက်လာတယ် … မျက်နှာလေးကလည်း … နီရဲတွတ်နေတာပဲဗျာ … နားရွက်ဖျားလေးတွေတောင် … နီတယ် … ပါကင်ဖွင့်ပြီးစ … ချာတိတ်ကို … ဒီလိုကြုံးတာ … ကျွန်တော် လွန်တယ်ဗျ … ခက်တာက … ကျွန်တော်ကလည်း … ဒီလိုကြမ်းမှ … အားရတာ … ဒီညမှ … ဘယ်လိုဖြစ်လဲ မသိပါဘူးဗျာ … ကျွန်တော်လည်း အရမ်းထန်နေတယ် … လက်တစ်ချောင်း ဝင်သွားတော့ … နောက်တစ်ချောင်း … နှစ်ချောင်းပူးထပ်ထည့်တယ် … အော်တာပေါ့ … ရုန်းတာပေ့ါ …။
ဒီလိုပဲ … ထည့်လေကျယ်လေပဲ … မထည့်ခင်ကတော့ … ကျဉ်းတာပေါ့ … နှစ်ချောင်းဆန့်တော့ … သုံးချောင်း … မီးလေး အသံက ပိုကျယ်လာတယ် … အောကားကို လော်စပီလာနဲ့ ဖွင့်ထားသလိုပဲ … အော်လိုက်တာဗျာ … အလုံခန်းမို့တော်တော့တယ် … နို့မို့ရင် … အောက်ကကောင်တွေ ပြေးတက်လာမှာ … သုံးချောင်းထည့်လို့ရတော့ … စအိုဝက တော်တော်ကျယ်သွားပြီ … အိုကေ … ထည့်လို့ရပြီပေါ့ … မီးလေး အဖုတ်ထဲက … ကျွန်တော့်ကောင်ကို … ဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်သည် … “ဟာ … ဟင့် …” မီးလေးက ထန်လွန်းပါတယ် … ထည့်တော့လည်း … အော်တယ် …ထုတ်တော့လည်း အော်တယ် … အော်ပလေ့စေ … များများအော်မှ … အနာသက်သာမှာ … သူအော်လေ … ကျွန်တော်ပိုသဘောကျလေပဲ … အစေ့လေးကို … နှစ်ချက်သုံးချက်ပွတ်လိုက်ပြီး … အရည်တွေ စိုရွဲနေတဲ့ … ကျွန်တော့် … ဒ-်ကို … မီးလေး စအိုဝထဲ … မြှုပ်လိုက်သည် …။
ဒီလောက်ချဲ့ထားတာတောင် … ကြပ်လွန်းသည် … သိပ်မဝင်ချင် … ဒ-်ဖျားက … လည်လည်ပြီး … ပြန်ထွက်ချင်သည် … “အား … ကို … ဖြေးဖြေးနော် … မီးကို သနားပါအုံး …” “အား … ” “အား … ” “အား … ” “ဟင့် … ထပ်မထည့်နဲ့လေ … အား … အား … မီးကို မရက်စက်နဲ့လေ …” “အား ….” ကျွန်တော့် –ီးက … တထစ်ချင်းသာ ဝင်ပါတယ် … ဆောင့်သွင်းလို့လည်း မရဘူး … တင်းကြပ်နေတဲ့ … စအိုထဲ … ဖြေးဖြေးချင်းဝင်နေရင်း … စိတ်မရှည်တော့ … တစ်ချက် ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်ပစ်လိုက်တယ် … “အား … အရမ်းနာတယ် … အရမ်းနာတယ် … ဟူး” မီးလေး ဖင်ကို အတင်းဖြဲပြီး … ဆောင့်ထည့်ပစ်လိုက်တယ် … စိတ်မရှည်တော့ဘူး … အား … ဝင်သွားပြီဗျ … တစ်ဆုံးပဲ … ကျွန်တော့် ဆီးခုံနဲ့ … သူ့ဖင်နှစ်လုံး ကပ်တဲ့အထိ သွင်းပစ်လိုက်တယ် … မီးလေးကတော့ … တအားရုန်းတာပဲ … ရုန်းပလေ့စေ … ဗိုက်အောက်ထဲ … လက်ကို လျှိုပြီး … အဖုတ်လေးကို လိုက်စမ်းလိုက်တယ် …။
တွေ့ပြီ … မီးလေး အဖုတ် … အစေ့ … အစေ့ ဘယ်မှာလဲ အစေ့ … စမ်းလို့ရတာနဲ့ … ပွတ်ပစ်လိုက်တယ် … ဒါမှ … မီးလေး အနာသက်သာမှာ … အိုး … ကောင်းလိုက်တာဗျာ … မီးလေးကို … ဒါကြောင့် သဘောကျတာ … ဘယ်လောက်ပဲ နာအောင်လုပ်လုပ် … ဖင်ကြီးကို … ကော့ကော့ပစ်တာကို … အရမ်းကြိုက်တယ် … ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို … ကျိုးမတတ်ညှစ်ထားပြီး … စကောဝိုင်းလို … ဖင်လေးကို … ယမ်းနေတော့ … ကျွန်တော့် ဒုတ်က အထဲမှာ ယမ်းနေတယ် … “အား … ဟင့် … ဟင့် … ရှီး” အဝင်အထွက်တွေက … ဖြေးဖြေးလုပ်နေရာကနေ … မြန်လာတယ် … မီးလေးလည်း … ကောင်းလာတယ် ထင်ပါရဲ့ … ဖင်ကို … အနောက်ကို ကော့ကော့ပေးတယ် … ရဲရဲနီနေတဲ့ … မီးလေးနားရွက်ကို ကြည့်ပြီး … အရမ်းစိတ်ထလာတယ်ဗျာ … ။
ကျွန်တော် အတင်းကို ဆောင့်တော့တာပဲ … ဟူး … ပြီးပြီ … ပြီးပြီ … ပြီးခါနီးလေ … အတင်းဆောင့်လေပဲ … အားကုန်ဆောင့်တော့ … ခုတင်တောင် တုန်လာတယ် … မတတ်နိုင်ဘူး … ကျွန်တော့်ကောင် ပေါက်ကွဲထွက်တော့မယ် … “အား … ပြီးပြီ … မီးလေးရယ် … ပြီးပြီ … ကောင်းလိုက်တာကွာ … ကောင်းလိုက်တာ …” အရှေ့နဲ့ အနောက်က … အရသာချင်းမတူဘူးဗျ … အဖုတ်ကို ဆယ်ခါလုပ်လို့ ပြီးတာနဲ့ … စအိုကို … တစ်ခါလုပ်လို့ ပြီးတာ … အဲဒီလောက်ကို ကွာတာဗျ … ဟူး … မောလိုက်တာဗျာ … အားလုံးလည်း ပြီးရော … ကျွန်တော် ပက်လက်လန်သွားပါတယ် … မီးလေးက … လွုပ်တောင် မလွုပ်နိုင်တော့ဘူး … “အရမ်းကောင်းတယ်ကွာ … မီးလေး ဖင်က … တော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် …” အစ်ကို ကျေနပ်ရင်ပြီးတာပါပဲအကိုရယ် …ပြီးပါပြီ။